Suudaan oo qabatay hub & rasaas laga keenay Itoobiya - Awdinle Online
Suudaan oo qabatay hub & rasaas laga keenay Itoobiya
Bayaan ka soo baxay Milliteriga Suudaan ayaa lagu xaqiijiyey inay gacanta ku dhigeen Hub fara badan oo isugu jiray Qoryo, Gantaalo, Bistoolado iyo rasaas kala duwan, kuwaasi oo si Tahriib ah looga soo gelin lahaa xuduudka Bariga Suudaan.
Qoraal la soo dhigay Bartooda Rasmiga ee Milliteria dalkaasi ayaa lagu soo bandhigay noocyada Hubka iyo Rasaasta la soo qabtay, kuwaasi oo u badnaa Bistoolado iyo rasaas.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Hubkaasi oo laga soo tahriibiyey gudaha dalka Ethiopia la doonayey in si dhuumaalaysi ah looga soo dusiyo Deegaanka Barakaat Nurayn ee Gobalka Fashqat, una dhow Xuduudka ay la wadaagaan Ethiopia.
Dhinaca kale, Sirdoonka Milliteriga Suudaan ayaa la sheegay inay kaalin ka qaateen sidii loo qaban lahaa Hubkaasi, kadib, markii ay heleen Xog iyo Xooraansi ku aadan Hubkaasi la soo gelin lahaa Suudaan.
Toddobaadkii hore ayey ahayd markii ay Dowladda Suudaan ku eedeysay Ethiopia inay hubeynayaan Koox Falaago oo ku kacsan Dowladda Sudan, kana dagaalanta Gobalka Blue Nile ee Bariga Suudaan, una dhow xuduudka Ethiopia.
Previous articleGaari uu la socday Madaxweyne oo la weeraray
Next articleKoonfur Galbeed oo soo saartay amaro lagu xakameynayo faafitaanka COVID-19